Anyị Nanị nkesa na Turkey maka anyị Laser Hair mwepụ Machine
Ekele maka nkwado anyị na onye nkesa na Turkey naanị maka igwe wepụ ntutu anyị laser site na 10th, Ọkt.2018 ruo 10, Ọkt. 2022! Maka ndị ahịa Iran nwere mmasị na igwe iwepụ ntutu anyị laser, biko kpọtụrụ onye na-ekesa anyị Iran. ...
1: freckle Name ： Afọ ： 21. ọrụ sympt Ihe mgbaàmà nke ụmụ akwụkwọ ： A na-ahụ ya site na ọkụ aja aja ma ọ bụ ọchịchịrị aja aja ntụpọ ntụpọ, gburugburu, oval ma ọ bụ oge ufodu. Kè ahụ doro anya, dayameta dị ihe dịka 2mm, elu ahụ na-adị larịị, dịpụrụ adịpụ ma ghara ịgbanye, na nkesa ahụ dị iche. nchoputa ： frec ...
Sano Laser ụlọ ọrụ ịga Dubai, Spain, Italy, Turkey, Poland, na Romania ngosi kwa afọ. Nke a bụ foto mgbe anyị gara India Ngosi. India bu ahia buru ibu na ulo oru anyi. Anyị nwere ọtụtụ ndị nkesa na India. Anyị na-abịakwa India ugboro atọ n’afọ. Na Turkey ngosi, diode ...
No.1 Igwe ahia na-ere ọkụ na 2020 –Magshape HIFEM EM-kpụrụ akpụ akwara ụlọ
Magshape HIFEM EM-kpụrụ akpụ akwara ụlọ bụ Top 1 na-ere igwe na ụlọ ọrụ m na 2020. Ọ bụ teknụzụ ọhụụ, mana ọ na-ere ọkụ ugbu a! Magshape bụ ihe na-eme ka ahụ mmadụ rụọ ọrụ nke ọma. O adabara slimming, ịkpụzi, gaini ...
Ọrịa Co2 Laser, otutu mwepụ mwepụ, Shr Ipl Opt, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Co2 Fractional Laser Machine, Ems Akwara mkpali Machine,